Lavona maimbo, Akanitra misy fofona, Samba mamofitra - Seawell
Manao labozia DIY Kits
Manome labozia mofomamy fitsangatsanganana an-tsisatra miloko marevaka ho an'ny haingo
Ny avana dia nofinofin'ny fahazazana. Ny avana dia voninkazon'ny fahatanorana. Ny avana koa dia ny fanirian'ny orana sy hain'ny tsirairay. Avelao ny labozia nomerika avana mivangongo miaraka aminao amin'ny fety nahaterahana sambatra! !!
Mofomamy mofomamy fitsingerenan'ny andro nahaterahana volamena
Ny labozia volamena nomerika volamena dia vita amin'ny fitaovana manta tsara, tsy manapoizina ary tsy misy setroka, ary mihazona labozia lava kokoa dia mety hampihena ny fisian'ireo lozam-pifamoivoizana. Ny labozia volamena amin'ny fetin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana dia lafo kokoa ary manampy fifaliana amin'ny fety nahaterahanao.
NY TANORA FARANY
Maimbo Soavala tsy manitra tsy misy fofona mamofona fahafinaretana Soy kaontrano ao an-trano ...
Maimbom-boalavo milomano-3 mamirapiratra Soy Wax Travel tin Gift Candles fo ...
Maimbo Soy manitra fofona manitra maintso ny rano
Maimbo Noely Fofona Noir Fahafatesana Noir
Pillar Candle-4 15 santimetatra lava habeny Vanilla Perfume Oll Paraffin Wax ...
Pillar Candle-3 Miloko fandoroana metaly tsy misy dikany ...
Jiro Pillar-2 Jiro sy milina hivavaka mamatsy 7cm tsy manam-pahaizana ...
Pillar Candle-1 White sy Ivory Lavender Scents Fahafahana Soy Simpl ...
Elegance marevaka miloko lava Taper Lalao
lokon'ny avana Beeswax fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Stick
ireo andian-tantely miendrika vilia feno labozia ao anaty siny plastika
Labozia voajanahary varotra varotra
Ny tanana beeswax 100% voajanahary dia natsipy labozia mitifitra
Ilay labozia tsangambato Beeswax
tànana nohodinin-tsilo vita amin'ny vovon-tantely
6hora mandrehitra labozia famotsoran-tantely
4 santimetatra vita amin'ny labozia voaroaka 100% avo
Paraffin Wax Smooth Surface Mahafinaritra marevaka isan'andro mifono kitapo
Trano fonosana Paraffin Wax White
8inch White Plain Plain of White isan'andro ampiasaina amin'ny labozia tsy misy alikaola ho an'ny tsenan'i Afrika
Hebei Seawell dia manomboka ny orinasa iraisam-pirenena ireo labozia hatramin'ny 2005. Ary manana orinasa Candle izahay any amin'ny tanàna Tianjin sy ny tanàna Qingdao, izay efa nandia ny ISO9001. Ary ny vokatra azontsika dia afaka mahazo ny mari-pahaizana CE sy ROHS, Misy mpiasa mazoto 400 sy mpanara-maso miasa amin'ny atrikasa 20000 metatra tora-droa. Ny famoam-bokatra dia famoahana 100 isaky ny isam-bolana ary ny fatra lehibe indrindra dia fametrahana 115 ao amin'ny Oct. 2008. maherin'ny 90% ny baiko vita ao anatin'ny roapolo andro ..
Raiso ny fanavaozam-baovao sy fanolorana ...
© Copyright - 2019-2020: Zo rehetra voatokana. Tips - Hot Products - Sitemap
labozia andry riaka, labozia feno varotra, labozia tapy, labozia, labozia, labozia tariby,